Ny Zava-misy Mahafadiranovan’ny ‘Amerikana Tsy Nahy’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2018 5:17 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, Deutsch, عربي, English
Iray amin'ireo Amerikana tsinahy i Kevin P. Rehefa avy namaky lahatsoratra iray nivoaka vao haingana tao amin'ny Global Voices mikasika ny tsy rariny mahafadiranovana apetraky ny rafitra hetra Amerikana amin'ny mpifindra monina, nahazo aingam-panahy izy mba hamerina hijery indray ny tantara mifototra amin'ny zava-niainany manokana. Eto ambany ny lahatsoratra nasiam-panovana.
Mandeha ny fotoana. Hitanao fa tsy irery ianao amin'ity toe-javatra ity. Mihaona amin'ireo vondron'olona somary miaritra ny hetra mifotora amin'ny zom-pirenena Amerikana ianao. Mizara ny fihetseham-ponao amin'izy ireo, ary mahita fa misy olona eto sy any ho any miasa hanatsara ny toe-draharaha, mahatonga anao hahatsapa ho tsaratsara kokoa. (Misaotra an'izany ry namana mpiara-mijaly.)